Australia inobvisa mapuramu anodzoreredzwa kudzikisa magetsi bhiri | Green Renewables
Australia inobvisa maprimiyamu kune anovandudzwa kudzikisa magetsi bhiri
Hurumende yeAustralia yakazivisa iwo maprimiyamu kuchikamu chinowedzerwa magetsi zvichabviswa, sechikamu chehurongwa hwesimba hunotarisira kudzikisa mitero uye kuvimbisa iyo «yezvehupfumi» kugoverwa kwemakambani nevanhu.
Panzvimbo pekubatsira parizvino, ichatanga chirongwa chinonzi "National Energy Guarantee" kukurudzira vanogovana muchikamu ichi tenga base base simba, mukuwedzera pakushandisa huwandu hwesimba risingasvibise simba gore rega rega.
Chiyero, icho chinovakirwa pamazano eEn Energy Safety Board, ichapa "magetsi anodhura uye akavimbika, ichititendera kutevedzera zvisungo zvedu zvepasi rese«, Akavimbisa Gurukota reMagetsi, John Frydenberg uye Mutungamiriri, Malcolm Turnbull.
Zvinoenderana nevanopikisa, iri basa «zvakajeka»Pamberi pemasangano anochengetedza emubatanidzwa anotonga, ichabvisa mari yepamberi yesimba rinowedzerwazve kubva muna 2020, tichifunga kuti chikamu ichi chinokwanisa kukwikwidza mumusika wepachena.
Zvinoenderana nehurumende zvakachipa. Zvinoreva kuti hakuzove nerubatsiro, hapana mitero kana echinjana masystem.
Sarudzo iyi inosanganisira kubvuma kurudziro yakapihwa mwedzi mina yapfuura nasayendisiti mukuru wehurumende yeAustralia, Alan Finkel, kuti shanduko iitwe neat yakanangana nekushandiswa kwesimba rinowedzerwazve kuitira kuti panosvika gore ra2030 vange vopa zvinopfuura makumi mana nezvipfumbamwe kubva muzana zvekushandisa kwesimba.
Zvinoenderana nezvakataurwa nevaongorori kumatanho akasiyana eterevhizheni, iyo hurongwa hwehurumende inotora kuti izvo zvinodzokororwa zvinomiririra isingasvike makumi mana muzana yegore iro.
Hurumende yemubatanidzwa unochengetedza, unosanganisira vanotsigira indasitiri yemarasha uye vasina chokwadi nezvekushanduka kwemamiriro ekunze, vanoona kuti dzimba ichaponesa gore rega kusvika kuAU $ 115 (US $ 90,22 kana € 76,50) pakati pa2020 na2030.
Kufanana neSpain, mutengo wemagetsi wakawedzera neanopfuura makumi matanhatu muzana pamakore gumi apfuura muAustralia
Mutungamiri weLabour Party, Bill Shorten, akapa Turnbull mhosva yekuzvipira pane zvaidiwa naVaTony Tony Abbott, vanozvimisikidza kusava nechokwadi pakatarisana neshanduko yemamiriro ekunze.
Mutauriri wezvevashandi nezvesimba rinowedzerwazve, VaMark Butler vanovimbisa kuti hurongwa hweHurumende "achaparadza simba rinowanikwazve uye zviuru zvemabasa muindastiri ino. Akawedzera zvakare kuti bato rake rinoda simba rakachena kumiririra makumi mashanu kubva muzana yesimba rekushandisa panosvika 50.
Kune rake divi, wekutanga weGreen Party, Richard di Natale, akafunga kuti kuzivisa kuchadzivirira Australia kusangana nezvinangwa akasimudzwa muchibvumirano cheParis.
Kunyangwe, Australia yakazivisa makore maviri apfuura kuti chinangwa chayo kwaive kudzikisa gasi inokanganisa kupisa mugore ra2030 pakati pe 26 uye 28 muzana pazasi 2005 mazinga.
Nehurombo, nhasi, inopfuura 85 muzana yesimba rinoshandiswa muAustralia rinobva mafuta, kunyanya kubva kumarasha. Mazhinji masayendisiti anotenda kuti inofanirwa kudzikiswa kubatsira kudzikisira mhedzisiro yeshanduko yemamiriro ekunze.
Neraki, iko kuvandudzika kukuru mukushanda kweanogona kudzoreredzwa kunobatsira vanozvimiririra vakazvimiririra kudyara mazviri, muenzaniso wakanaka kuve iyo Port Augusta solar thermal chirimwa.
1 Iyo hombe chirimwa chezuva chinodziya chirimwa munyika ichavakwa muAustralia
1.1 Thermal chirimwa
Iyo hombe chirimwa chezuva chinodziya chirimwa munyika ichavakwa muAustralia
Hurumende yeAustralia yakabvumidza kuvakwa kweiyo huru chirimwa chezuva chinodziya pasi. Iyi ichave nesimba rema megawatts zana nemakumi mashanu uye ichavakwa muPort Augusta, muSouth Australia.
Miti yacho inodhura 650 mamirioni emadhora eAustralia (510 mamirioni emadhora US), Ichagadzira inosvika mazana matanhatu nemazana mashanu emabasa ekuvaka evashandi vemuno, sekutaura kwevagadziri, uye inotarisira kubhadhara zvese magetsi emagetsi kuhurumende yenyika. Basa rinotanga gore rinouya uye rakarongerwa kupera muna 650.
SolarReserve, iri muCalifornia, ndiyo kambani inotungamira zvekuvaka. Iyo kambani yekuAmerica iriwo kumashure kwe110-megawatt Crescent Dunes CSP chirimwa muNevada.
Solar photovoltaic zvirimwa zvinoshandura mwenje wezuva wakananga mumagetsi, saka vanoda mabhatiri ekuchengetedza simba rakawandisa kana Zuva risingapenye; zvinomera zvezuva zvinopisa, zvechikamu chavo, shandisa magirazi kutarisa mwenje wezuva pane inopisa system.
Zvinoenderana nenyanzvi dzakasiyana, senge purofesa we YeAustralia Yunivhesiti, Matthew Stocks: "Rimwe rematambudziko makuru esimba rekushisa senge chishandiso chekuchengetedza ndechekuti inongogona kuchengetedza kupisa".
"Thermal inzira yakachipa kwazvo yekuchengetedza simba pane kushandisa mabhatiri"anowedzera purofesa wekusimba kwesimba reinjiniya Wasim Saman, anobva kuYunivhesiti yeSouth Australia.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Australia inobvisa maprimiyamu kune anovandudzwa kudzikisa magetsi bhiri
Mafuta eArctic mafuta haazoburitswe
Smog, chii icho, ayo mhedzisiro uye maitiro ekurwisa